गठबन्धन सरकारमा खटपट : देउवाको प्रस्ताव प्रचण्ड र माधवले गरे ठाडै अस्वीकार ! – GALAXY
गठबन्धन सरकारमा खटपट : देउवाको प्रस्ताव प्रचण्ड र माधवले गरे ठाडै अस्वीकार !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर अफ्ठेरोमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना चुलिएको छ ।
देउवाले प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि गर्न सकेका छैनन् । दुई तिहाई कम्युनिष्ट सरकार ढलेर बनेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले जुन उत्साह दिनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना चुलिएको हो ।
राजनीतिक दलप्रति जनता निराशा हुँदै गएको बेला सरकार ढाल्ने र पदकै लागि ‘बार्गेनिङ’ राजनीतिक गरिरहेको भन्दै शिर्ष नेताहरुको चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
यसबीच कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै पार्टीका सरकारमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले सरकारले जुन उत्साह दिनुपर्ने थियो, त्यो दिन नसकिरहेको टिप्पणी गरे ।
‘दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार ढलेपछि हाम्रो पार्टीबाट जनतालाई आशा थियो। हाम्रो पार्टीका सरकार जति सवल, सक्षम हुनुपर्थ्यो, त्यति भएन। नयाँ किसिमले उत्साह दिनुपर्ने थियो, त्यो नसकिरहेको पनि हामीले महशुस गरेका छौं।’ उनले भने ।
एमालेसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास
प्रधानमन्त्री देउवा नेकपा एमालेसंगको सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयासमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको दूत बनेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेटघाट गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले नेताहरूसँग देउवाको संवाद ठप्प थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेर अप्ठेरोमा परेका देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको बुझिन्छ ।
देउवाले ओलीसंगको संवादका लागि मन्त्री कार्कीलाई बालकोट पठाएका हुन् । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले तेश्रो पटक संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाई छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारसहित अर्ली इलेक्शनको सम्भावनाबारे पनि कार्कीले ओलीसँग छलफल गरेको बताइएको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार गठबन्धनको बैठकमासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गराउनेबारे पनि प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ठाडै अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।
एक नेताको भनाई अनुसार गठबन्धनको नेताहरुले संसद विघटन अस्वीकार गरेपछि देउवाले ओलीसँगको निकटता बढाएको हो । प्रधानमन्त्री बन्नु अघि पनि देउवा र ओलीबीच चुनावमा जानुपर्नेबारे संवाद हुँदै आइरहेको थियो ।
चुनावमै जानु पर्ने जोड बल गर्दै आएका देउवाले प्रचण्डको दवाव थेग्न नसकेर मध्यावधि चुनावमा जाने रणनीति बनाएको बताइन्छ । जतिसक्दो पार्टीको महाधिवने सक्ने, र चुनावमा जाने देउवाको रणनीति रहेको बुझिन्छ । चुनावमा जानेबारे विभिन्न माध्यम मार्फत दलका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।